VIDIM-BARY: MIHENA TSIKELIKELY NY VIDINY ENY AN-TSENA - Ekomada - Infos et Actualités Madagascar
VIDIM-BARY: MIHENA TSIKELIKELY NY VIDINY ENY AN-TSENA	Vary mahatratra 100.000 taonina no miakatra avy any amin’ny faritra Alaotra sy Menabe. Mety misy hifandraisany amin’izay ve? Manomboka hita taratra eny an-tsena ny fihenan’ny vidim-bary. Raha tsiahivina dia nanatontosa fidinana ifotony ihany koa ny avy ao amin’ny ministeran’ny varotra, tamin’izany no nanambaran’nytompon’andraikitry ny fanaraha-mason’ny varotra fa efa midina tsikelikely ny vidin’ny kilaom-bary eny an-tsena.
Raha nanodidina ny 2500 Ariary ny kilaon’ny karazam-bary makaolioka tany amin’ny voalohan’ny taona , amin’izao efa tafidina hatrany amin’ny 2000 Arirary. Izany hoe nilatsaka 500 Ariary be izao .
Ho an’ny vary gasy, mbola maivamaivana ny filatsaky ny vidiny, na izany aza anefa dia efa zava-dehibe ny fidinan’izany ho 1800 Ariary raha 1900 Ariary teo aloha.
Marihina, fa tao anatin’izany fiakaran’ny vidim-bary izany, dia isan’ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana ny fanomezana toro-marika ireo mpandraharaha mba hampitombo ny taham-panafaram-barin’izy ireo, teo ihany koa , araka ny voalaza tetsy ambony, ny fandefasana ireo tompon’andraikitra avy amin’ny ministeran’ny varotra mba hijery akaiky ny zava-misy eny amin’ireo mpanangom-bokatra .
Inoana arak’izany ny mbola hidinan’ny vidim-bary be be kokoa ato anatin’ny andro sy volana manaraka.